एनआइसी एशियामा कार्यबाहक सीईओको जिम्मा न्यौपानेलाई
काठमाडौं । एनआइसी एशिया बैङ्क लिमिटेडले कार्यबाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रोशन कुमार न्यौपानेलाई कार्यबाहक सीईओको जिम्मा लगाइएको छ । बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालको फागुन २३ गते...
सेञ्चुरी बैंकको सातौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं, ३० फागुन । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडको सातौं वार्षिक साधारण सभा बैंकका अध्यक्ष राजेश कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज ३० गते आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकालीमा सम्पन्न भएको छ । साधारण सभ...
प्राइम लाइफको मूल्य समायोजन
काठमाडौं । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको १२ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयरको समायोजन पछि मूल्य रू. ५ सय ५१ तोकेको छ । नेप्सेले यस बीमा कम्पनीको आधार मूल्य रू. ७ सय २७ लिएको हो ।...
गण्डकी विकास बैंकले १९.३१ प्रतिशत बोनस शेयर दिने
काठमाडौं,२७ फागुन । गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडको २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हकप्रद शेयर पश्चात कायम रहने चुक्ता पुँजीमा १९.३१ प्रतिशत बोनस शेयर दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय नेपाल राष्ट्र...
सिभिल बैंक र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स बीच बैंकासुरेन्स सम्झौता
काठमाडौं, २५ फाल्गुण । सिभिल बैंक लिमिटेड र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बीच बैंकासुरेन्स सम्झौता भएको छ । सो सम्झौता पत्रमा आज सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ्ग र एभरेष्...
राष्ट्रिय बीमाले शेयरधनीलाई दियो चक्मा ! १ सय २५ प्रतिशत बोनसको घोषणा
काठमाडौं, १३ फागुन । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना शेयरधनीलाई १ सय २५ प्रतिशत बोनस दिने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले शेयरधनीलाई १ सय २५ प्रतिशत बोनसशेयर दिएर चक्मा दिने भएको हो ।...
आज पनि घट्दै, मध्यान्हसम्म एक दसमलव ११ अंकले गिरावट
काठमाडौं, १० फागुुन । नेप्से आज पनि घट्दै गएको छ । आज बिहिबार मध्यान्ह १२ बजेसम्म नेप्से एक दसमलव ११ अंकले घटेको छ भने सेन्सिटिभ शुन्य दसमलव २४ अंकले घटेको छ । यसबिचमा ६४ वटा कम्पनीहरुको चार सय वटा...
बैकिङ कसूरमा विनायक प्रेसका संचालक अशोक हर्ष पक्राउ
काठमाडौं,९ फागुन । आफ्नो हक भोग नभएको जग्गालाई आफ्नो देखाई माछापुच्छ्रे बैङ्कको शाखा कार्यालय पुतलीसडकबाट रु १ करोड ४२ लाख कर्जा लिई बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने ३०, धोविधारा बस्ने वर्ष ५५ का विनाय...